Fanomezana ny Dissertation IWCA - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
15 Avrily isan-taona.
Ny Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena (IWCA) dia manamafy ny vondrom-piarahamonina foibe fanoratana amin'ny alàlan'ny hetsika rehetra ataony. Ny fikambanana dia manolotra ny The IWCA Dissertation Research Grant hanohanana ireo mpianatra doktorà rehefa miasa amin'ny famoahana lahatsoratra misy ifandraisany amin'ny foibe izy ireo. Ny fanomezana dia natao hamatsiana vola ny fandaniam-bolan'ny mpianatra mpianatra doktorà izay miasa hatramin'ny famitana ny disertasy sy ny mari-pahaizana doctorat. Ny vola dia azo ampiasaina amin'ny fandaniam-bola; kojakoja, fitaovana ary rindrambaiko; fitsangatsanganana amin'ny toerana fikarohana, hanolorana fikarohana, na hanatrehana fihaonambe na institiota mifandraika amin'ny asa; ary tanjona hafa tsy rakotra eto fa manohana mpianatra nahazo diplaoma. Ireo mpianatra Doctoral izay manana prospectus ekena ary amin'ny dingana rehetra amin'ny fikarohana / fanoratana ankoatry ny prospectus dia ampirisihina hampihatra.
Ireo nahazo fanampiana dia hahazo $ 5000 avy amin'ny IWCA rehefa voafantina ho mpandresy loka.
Ny fangatahana dia tokony hatolotra amin'ny fe-potoana takiana amin'ny alàlan'ny Portal momba ny mpikambana IWCA. Ny fonosana fampiharana feno dia ahitana ireto manaraka ireto ao anaty rakitra pdf iray:
Taratasy fanolorana natolotra ny seza fanampiana ankehitriny izay mivarotra ny komity ny tombontsoa azo avy amin'ny fanohanana ara-bola. Ny tena manokana dia tokony hanao izao manaraka izao ny taratasy:
Mangataha ny fandinihan'ny IWCA ny fangatahana
Ampahafantaro ny mpangataka sy ny tetikasa
Ampidiro ny porofo momba ny fankatoavana ataon'ny Birao Fikarohana momba ny andrim-panjakana (IRB) na ny fankatoavan'ny birao etika hafa. Raha tsy mifandray amina andrim-panjakana misy dingana toy izao ianao dia miangavy anao hitady torolàlana momba ny fanomezana sy loka.
Drafitra drafitra amin'ny famitana ny tetikasa
Taratasy fanovozan-kevitra roa: Ny iray avy amin'ny talen'ny dissertation ary ny iray avy amin'ny mpikambana faharoa ao amin'ny komitin'ny dissertation.
Andrasana amin'ireo nahazo loka
Ekeo ny fanohanan'ny IWCA amin'ny fampisehoana na famoahana ireo valim-pikarohana natao
Mandrosoa any amin'ny IWCA, mikarakara ny Filohan'ny Komity Vola, kopian'ny famoahana na famelabelarana azo
Mametraha tatitra momba ny fandrosoana miaraka amin'ny IWCA, hikarakara ny Filohan'ny Komity Grants, tokony ho XNUMX volana aorian'ny nahazoana vola fanampiana.
Rehefa vita ny tetikasa dia andefaso ny tatitra farany momba ny tetik'asa sy ny PDF momba ilay famelabelarana ho an'ny Birao IWCA, izay karakarain'ny Filohan'ny Komitin'ny Vola
Diniho fatratra ny handefa sora-tanana miorina amin'ny fikarohana tohanan'ny iray amin'ireo famoahana IWCA: The Writing Center Journal, na Ny famerenana ny peer. Vonona ny hiara-hiasa amin'ny (tonian-dahatsoratra sy mpandinika) hanitsy ny sora-tanana mety hamoahana azy
2021: Yuka Matsutani, "Fanelanelanana ny elanelana eo anelanelan'ny teoria sy ny fampiharana: Fandalinana fanadihadiana momba ny torolalana ho an'ny fifaneraserana sy ny fomba fampianarana ao amin'ny foibe fanoratana ao amin'ny Oniversite"
2020: Jing zhang, “Miresaka momba ny fanoratana any Shina: Ahoana no fomba anaovan'ny ivotoeram-panoratana ny filan'ny mpianatra sinoa?”
2019: Lisa Bell, "Fampiofanana Tutors amin'ny Scaffold miaraka amin'ireo mpanoratra L2: Tetikasa ivon-toerana fanaovana fikarohana fikarohana"
2018: Lara Hauer, "Fomba fiasa Translingual ho an'ny fampianarana mpanoratra an-tsoratra amin'ny fiteny maro ao amin'ny foibe fanoratana amin'ny oniversite" sy Jessica Newman, "Ny elanelana misy eo: fihainoana misy fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny ivotoerana manoratra eo amin'ny fiarahamonina sy ny oniversite"
2017: Katrina Bell, "Mpampianatra, Mpampianatra, Scholar, Administrator: Fomba fiheverana ireo mpanolo-tsaina diplaoman ankehitriny sy Alumni"